कहाँ–कहाँ छ आज बाढीको जोखिम ? - Naya Pageकहाँ–कहाँ छ आज बाढीको जोखिम ? - Naya Page
कहाँ–कहाँ छ आज बाढीको जोखिम ?
काठमाडौं, ३२ साउन । नेपालमा फेरि मनसुन सक्रिय बनेको छ । मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू–भाग नजिक रहेका कारण देशभर मनसुन सक्रिय भएको मौसमविदले जनाएका छन् ।
आज (सोमबार) देशका अधिकांश भू–भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज देशका चार प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । आज कमला नदीमा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने र सतर्कता तह पार गर्न सक्ने पूर्वानुमान छ । कोशी र यसका सहायक नदीहरू तमोर, अरुण, दूधकोसी, मेलम्ची, इन्द्रावती, सुनकोशीमा पनि बहाव बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
कन्काई, वागमती, पूर्वी राप्ती र तिनाउमा पनि बहाव बढ्ने पूर्वानुमान छ । नारायणी, कर्णाली, महाकाली र यिनका सहायक नदीहरूमा बहाव सामान्य घटबढ हुने तथा सतर्कता तहभन्दा तलै रहने पूर्वानुमान छ । पश्चिम राप्ती र बबईलगायत मझौला नदीहरूमा पनि बहाव सामान्य घटबढ हुने तथा सतर्कता तहभन्दा तलै रहने पूर्वानुमान छ ।
आज इलाम, झापा, उदयपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काठमाडौं उपत्यका, चितवन, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर, नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कञ्चनपुर, कैलाली, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र आसपासका जिल्ला भई बहने स–साना नदीहरुमा बहाव बढ्ने छ । केहीमा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने पूर्वानुमान छ ।
विशेष गरी कमलामा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र सतर्कता तह पार गर्न सक्ने पूर्वानुमान रहेकाले नदी तटीय तथा डुबान भइरहने क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
यस्तो छ बाढीको पूर्वानुमान